China takelaka metaly Fibre laser fanapahana milina mpanamboatra sy mpamatsy |UNIONLASER
Karazana: Plate fibre laser fanapahana milina
1. Metal taratasy fibre tamin'ny laser fanapahana milina, mitondra Raycus / IPG / MAX loharanon-kery, hery 1000w, 1500w, 2000w, 3000w, 4000w, 6000w, 8000w, 10000w, 12000w amin'ny fanapahana metaly isan-karazany amin'ny 30mm1 ny hateviny.
2. Ny vidiny ambany sy ny fanjifana herinaratra dia 0.5-1.5kw / h;Ny mpanjifa dia afaka manapaka ny karazana takelaka metaly amin'ny alàlan'ny fitsofana rivotra;
3. Fampisehoana avo lenta.Nafarana tamin'ny laser fibre voafono tany am-boalohany, miaraka amin'ny fampisehoana maharitra ary ny androm-piainana dia mihoatra ny 100,000 ora;
4. Haingam-pandeha sy fahombiazana avo, ny hafainganam-pandehan'ny fanapahana takelaka metaly akaikin'ny am-polony metatra;
5. Ny laser fikojakojana maimaim-poana;
6. Ny sisin'ny fanapahana dia toa tonga lafatra ary ny endriny dia malama sy tsara tarehy;
7. Nanafatra ny rafitra fifindran'ny sy ny servo maotera, ary avo fanapahana marina;
8. Ny logiciel natokana dia ahafahan'ny sary na lahatsoratra ho voavolavola na hokarakaraina avy hatrany.Flexible sy mora miasa.
Faritra fanapahana 3000*1500mm
Karazana laser Raycus fibre laser loharano (IPG / MAX ho an'ny safidy)
Haingana manapaka 0-40000mm/min
Rack System natao tany Alemaina
Latabatra miasa sawtooth
Kojakoja azo atao rafitra rotary
Lanja milina 2000-3000 kg
1. Fitaovana fampiharana:Fibre Laser Cutting Equipment dia mety amin'ny fanapahana vy amin'ny Stainless Steel Sheet, Mild Steel Plate, Carbon Steel Sheet, Alloy Steel Plate, Lohataona Steel Sheet, vy Plate, Galvanized Iron, Galvanized Sheet, Aluminum Plate, Copper Sheet, Brass Sheet, Bronze Plate , Plate volamena, takelaka volafotsy, takelaka titanium, takelaka metaly, takelaka metaly, fantsona sy fantsona, sns.
2. Indostria fampiharana: UnionLaser Fibre Laser Cutting Machines dia be mpampiasa amin'ny fanamboarana Billboard, dokam-barotra, famantarana, Signage, Taratasy metaly, LED taratasy, Kitchen Ware, dokam-barotra taratasy, Sheet Metal Processing, metaly singa sy ny ampahany, vy, Chassis, Racks & Cabinets Processing, Metal Crafts , Fitaovana ara-javakanto metaly, fanapahana tontonana avo lenta, fitaovana, kojakoja fiara, solomaso, kojakoja elektronika, takelaka anarana, sns.
Inona no fitaovana mety ho tapaka tamin'ny laser fibre?
Ny karazana metaly rehetra, toy ny Stainless Steel, Carbon Steel, Mild Steel, Galvanized Steel, Aluminum, Copper, sns.
Inona no tombony ho anao amin'ny milina fibre Laser Cutting Machine?
Loharano tamin'ny laser ambony indrindra: kalitao taratra maharitra, fiainana maharitra;
Rafitra fanaraha-maso mora ampiasaina: Mora ampiasaina, na dia tanana maitso aza dia afaka manomboka haingana;
Serivisy miavaka: valiny haingana, serivisy aorian'ny varotra mandritra ny androm-piainana
Tsy fantatro izay milina mety amiko?
Rehefa azoko io milina io, fa tsy haiko ny fampiasana azy.Inona no tokony hataoko?
Hanome manual mpampiasa sy horonan-tsary momba ny milina izahay.Ankoatr'izay, afaka manome fiofanana an-tserasera ihany koa ny injenieranay.Raha ilaina dia afaka manome serivisy isan-trano ihany koa izahayRaha misy olana mitranga amin'ity milina ity mandritra ny vanim-potoana fiantohana, inona no tokony hataoko?
Ny UnionLaser dia hanome antoka 3 taona, ary hanome ampahany maimaim-poana mandritra ny vanim-potoana fiantohana milina raha misy olana ny milina.
Izahay koa dia manome fiainana maimaim-poana aorian'ny varotra.Noho izany, misy olana, aza misalasala mampahafantatra anay, hanome anao izahay
Ahoana ny fomba fandoavam-bola ary ahoana ny momba ny fotoana fandefasana?
Manaiky izahay hanao ny fandoavam-bola amin'ny T / T, carte de crédit, fandoavam-bola amin'ny Internet, PAYPAL, Pay Later sns. Ny fotoana fitarihana 10-15 andro fiasana ho an'ny milina mahazatra;Ny fotoana 15-20 andro fiasana ho an'ny milina tsy manara-penitra.
teo aloha: Masinina fanapahana laser avo lenta 3000w - milina fanapahana laser fibre tsara indrindra - UnionLaser
Manaraka: CNC Pipe Laser Cutting Machine miaraka amin'ny loharano Laser Fibre